Fikarohana momba ny firaisana Ryerson-Semkiw Ny fizahana fikarohana momba ny firazanana ao amin'ny Reellarnation miaraka amin'ny Torolalana ho an'ny Fanahy na ny Fanahy Masina Ahtun Re - Fikarohana momba ny vatana
Ireo olo-malaza sy olo-malaza momba ny vatana dia lasa nalaza tamin'ny alalan'ny asa nataoko niaraka tamin'i Kevin Ryerson, izay voalaza fa marina. Mifanohitra amin'izany, ny tranga rehetra aseho amin'ny sokajy Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano, toy ny Fitovozan-kevitra ara-batana, Birthmarks, sns., avy amin'ny mpikaroka mahaleo tena, ary mifantoka amin'ny asan'ny Ian Stevenson, MD.
Kevin Ryerson dia fampahalalam-baovao mahazatra manerantany fanta-daza, nanomboka ny laza Shirley MacLaine nanoratra momba ny fiaraha-niasany tamin'i Kevin tao amin'ny bokiny mpisava lalana, Sahy maka risika. Taorian'izay, rehefa vita ny dikan-ny sarimihetsika Sahy maka risika dia novokarina, Kevin nilalao tao amin'io sarimihetsika io. Kevin no mpanoratra Fifandraisana fanahy: ny lalan'ny fanahy.
Amin'ny maha mpanelanelana amin'ny haino aman-jery azy, niditra amina fanjakana misaintsaina i Kevin mba hahafahan'ny fanahy mampiasa ny vatany hifandray amin'ny olombelona. Rehefa miteny amin'ny alàlan'i Kevin ny fanahy iray dia mipoitra ny toetra sy ny feon'ny fanahy, izay tsy mitovy amin'ny feon'i Kevin sy ny toetrany. Taorian'ny fivoriana iray izay nitarihan'i Kevin fanahy fanahy dia tsy tadidin'i Kevin ny zava-nitranga nandritra ilay fotoana.
Tao amin'ny 2001, nanomboka nanatrika fivoriana niaraka tamin'i Kevin aho ary nahita fa izy dia nitarika mpitarika fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re, izay manana fahaizana manao lalao marina ao amin'ny vatana vaovao. Tao amin'ny fanombatombako, Ahtun Re dia afaka namantatra tsara ny fiainan'ny olona teo aloha, ary koa ny mamantatra ny fampodiana ananan'ny olona avy amin'ny tantara.
Ao amin'ny tranonkala iray momba ny tranokalan'ny Reincarnation Research dia manatrika aho tranga dimy momba ny vatana vaovao izay ohatra amin'ny fahaizan'i Ahtun Re manao lalao marina. Angamba ny ohatra manaitra indrindra sy mampiala voly an'ny talenta Ahtun Re dia misy tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Laurel sy Hardy | Josh sy Danny Bacher. Rehefa nanamafy ity lalao ity i Ahtun Re dia tsy fantatro akaiky momba an'i Josh sy Danny ary indrindra indrindra fa tsy nanana fahalalàna aho fa manana fifandraisana akaiky izy ireo Laurel sy Hardy.
Rehefa niresaka tamin'i Danny Bacher aho dia nilaza taminy fa izy io no tamin'ny vatana vaovao indray vao teraka Oliver Hardy, Gaga aho rehefa nahalala fa i Josh sy Danny dia nanomboka nilaza fa ry Laurel sy Hardy dia toy ny zazakely. Tamin'ny vola azon'izy ireo tamin'ny làlan'ny gazetiny, nividy fakantsarin'ny sarimihetsika izy ireo ary nanomboka nanao sarimihetsika malemy toy ny ankizy. Rehefa nividy ny fiarany voalohany izy ireo, dia nanao sarimihetsika mozika filalaovana Laurel sy Hardy, izay nilalao azy ireo Nifindra tany Manhattan sy New Jersey izy ireo. Tao amin'ny fampisehoana voalohany an'i Off-Broadway, namorona ny sarimihetsika mangina nataony izy ireo, nanavao ny fampisehoana komedikan'i Laurel sy Hardy. Ankoatra izany, Danny dia mpanangom-bokatra iray momba an'i Laurel sy Hardy nandritra ny androm-piainany ary izy mihitsy aza dia nanana pataloha sy fitafy izay nasehon'i Ollie tao an-tranony. Amin'ny teny hafa dia nahazo ny akanjony manokana i Danny nandritra ny androm-piainany taloha. Ankoatra izany, Josh sy Danny dia manana endri-javatra mitovy amin'izany Stan ary Ollie.
Ireo fifandanjana misy eo amin'i Oliver sy Hardy sy Josh ary Danny Bacher dia tafahoatra loatra ka azo adika hoe fifandrifian-javatra. Niantso ireo karazana tranga ireo aho izay nahatonga ny olona tsy dia nankasitraka ny fiainany manokana taloha ho toy ny "toe-piterahana." Ny tranga iray hafa dia ny Dorothy Dandridge | Halavan'ny Berianina.
Azafady mba avereno jerena ny Laurel & Hardy | Tranga Bacher Boys amin'ny antsipiriany ary mankafy ny sarimihetsika mangina Bacher Boys, mitondra ny lohateny Ny sivana tsy ara-dalàna amin'ny lalàna. Ankoatra izany, jereo ny pilina fahita tamin'ny fahaterahana indray vao haingana, izay noforoniny, Fikarohana momba ny firaisana, izay ahitanao an'i Josh sy Danny mody hoe Laurel sy Hardy amin'ny maha-ankizy azy, mandre fijoroana ho vavolombelona avy amin'ny ray aman-dreniny momba ny fiheveran'ny zanak'izy ireo an'i Laurel & Hardy, jereo ny sarimihetsika momba ny felatanan-jazakely ary jereo ny fitadidian'i Danny ny fahatsiarovana an'i Laurel sy Hardy.
Tadidio azafady fa ny fiheveran'ny Bacher Boys an'i Laurel sy Hardy sy ny fihetsika mifandraika amin'izany dia efa ela talohan'ny nifandraisako tamin'i Josh sy Danny tamin'ny 2005 mba hampahafantarana azy ireo fa izy ireo dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Laurel sy Hardy. Ankoatr'izay, rehefa nanao an'ity fifandraisana ity aho dia tsy nahafantatra ny fiheveran'izy ireo an'i Laurel sy Hardy nandritra ny androm-piainany. Ho ahy, ireo fandinihana ireo, miaraka amin'ny efa napetraka fitsipika na rafitry ny vatana vaovao indray, manamarina ny fahafahan'i Ahtun Re manao lalao mifanaraka amin'ny vatana vaovao indray. Ny raharahan'izy ireo dia azo zahana amin'ny:
Ny Laurel sy Hardy | Fikambanana mpiara-miombom-bary amin'i Josh sy Danny Bacher
Niara-niasa tamin'i Kevin Ryerson aho hatramin'ny 2001 ary Ahtun Re dia naneho ny fahaizana hafahafa hanao izay toa marina ny lalao reincarnation ao anatin'ity faharetan'ny fotoana ity. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba nihaonako tamin'i Kevin Ryerson sy hamerenako ireo tranga dimy napetrako mba hanehoana ny fahaizan'i Ahtun Re, mankanesa any amin'ireto rohy manaraka ireto:
Fampahafantarana an'i Kevin Ryerson sy Ahtun Re miaraka amin'ny vatana vaovao teraka tamin'i John Adams
Ireo Core fototra izay mampiseho ny fahafaha-mavesatra ataon'i Ahtun Re mba hahazoana mari-pandrosoana vaovao momba ny Revelarnara
Raha hanomana fivoriana miaraka amin'i Kevin, izay vita amin'ny finday, tongava amin'ny:
Famaritana Momba ny Firaisana Taonan'i Ryerson-Semkiw
Ny tranga momba ny sehatry ny fanambadiana ao amin'ity fizarana ity dia mifototra amin'ny asako miaraka amin'i Kevin Ryerson, ary koa ny fanombantombanana manokana, ny fanadihadiana sy ny fanehoan-kevitra momba ireo tranga ireo. Tsy misy fiaraha-miasa, fanamarinana na fanohanana avy amin'ireo olona lazaina fa raharaha momba ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana indray no lazaina na anoharana, raha toa ka omena manokana ny fampandrenesana toy izany.
Ny fahitako ny porofo manamarina ny fiainan'ny fiainan'ny olona samihafa dia tsy natao hanolo-kevitra fa ireo olona ireo dia mizara ny zavatra inoako, afa-tsy izay voalaza manokana.
Ny sasantsasany amin'ireo tranga naseho tao amin'ny fizarana Ryerson-Semkiw dia natolotr'ireo olona mpanohana ny ReincarnationResearch.com ary nomena ireo olona ireo any amin'ny tendron'ny pejy. Ny raharaha rehetra natolotry ny olon-kafa dia nohamafisina avy eo nandritra ny fivoriana niarahako tamin'i Kevin Ryerson. Misaotra an'ireo rehetra nandray anjara tamin'ity asa ity aho, izay hanampy amin'ny fananganana tontolo mivoatra sy milamina.